Usoro okike na-ewe ogologo na ogologo karị iji nwetaghachi mgbe ụkọ mmiri gachara | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe ndi ozo na-ewe ogologo oge na ogologo oge iji weghachi mgbe unwu miri
Ka okpomoku zuru ụwa ọnụ na-arị elu n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, a na-atụ anya na oké ọkọchị ga-adịwanye njọ ma sie ike karị n'ọtụtụ mpaghara ụwa. Enwere ọmụmụ ihe ọhụrụ na-egosi nke ahụ usoro okike nke ala na-ewe ogologo oge iji gbakee site na mmiri ozuzo na-adịbeghị anya karịa ka e nwere na narị afọ nke iri abụọ.
Mmụba nke okpomọkụ nke mbara ala nwere ike ime ka usoro okike ghara ịgbake kpamkpam. Nke a ga - ebute ọnwụ nke osisi na, ya mere, na nsị dị ukwuu nke gas na - eme.
1 Mgbe oké ọkọchị gasịrị
2 Data maka ọdịnihu
Mgbe oké ọkọchị gasịrị
Ndị otu Christopher Schwalm, sitere na Woods Hole Research Center na Falmouth, Massachusetts, United States, na Josh Fisher si NASA n'otu mba ahụ, tụrụ oge mgbake mgbe ụkọ mmiri gachara na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Iji tụọ nke a, ejirila amụma site na ụdị ihu igwe na nha sitere na ala.
Ọgwụgwụ nke nyocha ahụ bụ na ọ na-ewe ogologo oge karịa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile nke ala ịghaghachi mgbe oge ọkọchị gasịrị. E nwere mpaghara abụọ kachasị emetụta nsogbu a. Nke a bụ mpaghara nke ebe okpomọkụ na ndị nọ na mpaghara ugwu ugwu. N'ebe abụọ a, oge mgbake mgbe ụkọ mmiri ozuzo dị ogologo karịa karịa ndị ọzọ.
Site na mbara igwe ị ga-ahụ oke ọhịa niile nke mbara ala na usoro okike ndị ọzọ nke mmiri ozuzo na-emetụta n'ụzọ a ugboro ugboro. Ka okpomọkụ ụwa na-arị elu, ụkọ mmiri na-adịwanye njọ ma na-adịwanye njọ.
Data maka ọdịnihu
Ihe anakọtara na mbara igwe na-enye gị ohere iji nyochaa nkwekọ ndị ahụ n'oge gara aga na ihu igwe ugbu a, nke, n'aka nke ya, na-enyere aka belata ejighị n'aka na amụma ihu igwe n'ọdịnihu.
Oge ọ na-ewe maka usoro ndụ iji gbakee bụ oke ihe dị oke mkpa iji nwee ike ịtụle ịdị adị nke otu ihe n'ọnọdụ oke egwu. Ọ na-enyekwa aka ịmata ihe ọ bụ ụzọ nke osisi na-amalite ịnwụ n'ihi enweghị mmiri.
Oge dị mkpirikpi n'etiti ụkọ mmiri ozuzo, tinyere oge mgbake dị ogologo, nwere ike ibute ọnwụ osisi zuru oke, na-ebelata ikike mpaghara ala nwere ike ịmị carbon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Ihe ndi ozo na-ewe ogologo oge na ogologo oge iji weghachi mgbe unwu miri
Mgbanwe ihu igwe gbanwere ọbịbịa nke Spain nke '' nnụnụ ndị na-adịghị ahụkebe ''
China Billionaire Plan Imecha Mmiri Ya!